Mozambika " Journey-Assist - Zavatra tokony hatao, miantsena, kolontsaina, toetrandro ...
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Africa » Mozambika
Mozambika. Fampahalalana ankapobeny
Mozambika ho an'ny fizahan-tany. Inona no tokony hatao any Mozambika
Cape Town Mozambika
Mozambika dia manintona ireo mpandeha miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy (na terestrialy na anaty rano), zavamaniry manankarena, tanàna fahiny, torapasika mahavariana.
Mahagaga ny torapasik'i Mozambika
Nandritra ny roapolo taona lasa, ity firenena ity dia tafita tamim-pahombiazana tamin'ny krizy nateraky ny ady. Tsy mitsaha-mitombo ny fikorianan'ny mpizahatany mankany Mozambika. Anisan'izany, sokajy 2 no misongadina - ireo mpivezivezy manankarena izay tia fiononana sy maniry zavatra hafahafa, ary mamonjy kitapo hatrany izay tsy matahotra fandriana $ 5.
Mozambika dia mety ho an'ireo izay mitady fialan-tsasatra amoron-dranomasina refy sy tsy maimaika na mavitrika. Eto ianao dia afaka mahita morontsiraka tena tsara miaraka amin'ny fasika mahafinaritra. Ny tena malaza amin'izy ireo dia ny Tofu (izay tsara ho an'ny antsitrika ihany koa), Langoshe, Moma, Lurio, Barra. Ny Archipelago Bazaruto dia iray amin'ireo ivon-toeram-pisakafoanana an-tsokosoko, antsitrika, surf ary kitesurfing tsara indrindra eto an-tany.
Snorkeling sy misitrika ao Mozambika
Ireo mpandeha izay te handany ny fialan-tsasatra amin'ny trano fandraisam-bahiny izay lavitra an-tanàna dia hahazo tombony amin'ny Zinave, Gorongosa ary Banyine Mozambique Reserve. Ny safidin'i Jeep dia voalamina ao amin'ny faritaniny. Ny tapany avaratr'i Mozambika dia rakotra tendrombohitra izay manintona mpihaza. Ankoatr'izay, ny mpizahatany izay liana amin'ny tsangambato ara-tantara taloha, ary koa ny kolontsain'ireo olona teratany Afrika, dia mankany avaratra.
Sarintany moz mozika
Toetany ao Mozambika
Ao amin'ny faritra avaratr'i Mozambika, ny toetrandro dia manatona ny ekoatera (mari-pana eo amin'ny +25 hatramin'ny +28), any amin'ny faritra atsimo, ny rivotra ara-barotra tropikaly no manjaka (manomboka amin'ny +20 ka hatramin'ny 22). Ny orana manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny Mey. Matetika misy mosary sy rivodoza mahery vaika mankany amin'ny fandringanana.
Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny fizahantany dia ny Mey ka hatramin'ny Novambra. Raha manapa-kevitra ny ho any Mozambika ianao mandritra ny vanim-potoanan'ny orana, dia tadidio fa amin'ny volana febroary sy martsa dia maro ny lalana eto amin'ity firenena ity no rava indrindra, indrindra ny faritra afovoany sy atsimo. Tonga eto izy ireo ny volana aogositra sy septambra mba hifankazatra amin'ny biby terestrialy dia ho an'ny vorona - hatramin'ny desambra ka hatramin'ny aprily
Loza any Mozambika
Na dia tsy ela akory izay dia nisy ady an-trano tao Mozambika nandritra ny fotoana ela, ny mponina eo an-toerana dia manavaka amin'ny fizaram-panahy amin'ny ankapobeny mpizaha tany. Misy ny fahazoana karazana hepatita, ary koa ny mpitsabo aretin-tsaina, noho io antony io, rehefa avy tonga dia tsy maintsy manaraka ny fenitry ny fahadiovana tsotra ianao: fandavana ny fisotro rano tsy misy rano, ny fampiasana ireo vokatra fidiovana. Ny safidy vakansy dia azo atao tsara, saingy tsara raha ilaina vaksiny amin'ny tazo tropikaly sy tazomoka.
Any Mozambika, mpizara sapper tany am-boalohany dia miasa ny voalavo marsupial. Ireo rodentsita ireo dia fantatra fa mpamily mahery fo mitady toeram-pitrandrahana, akorandriaka ary zavakanto mipoaka hafa tavela tamin'ny ady.
Voalavo Marsupial - safira any Mozambika
Mbola mitera-doza ihany koa ny hoe mandeha amin'ny toeram-pitrandrahana iray. Ny ampahany sasany amin'ireny sehatra ireny dia asiana marika fampitandremana, fa tsy ny antsasaky ireo toerana ireo no tsy voalaza. Noho izany, tsara kokoa ho an'ireo tia ny fizahan-tena mitaky fandalinana za-draharaha ary mandeha an-tongotra amin'ny lalana voadaroka na miala tanteraka ny hevitra momba ny fitsangatsanganana tsy miankina any Mozambika.
Mba hanjonoana ara-dalàna eto amin'ity firenena ity, dia mila fahazoan-dàlana navoakan'ny Sampana fitantanana maritimin'ny sampandraharaham-panjakan'i Mozambika.
Misy ihany koa ny fandrarana ny fifohana sigara any amin'ny toerana azon'ny besinimaro, fa ny ankamaroan'ny toeram-piomanana dia tsy miraharaha azy ireo fotsiny.
Voarara mafy ny misotro rano amin'ny paompy any Mozambika. Ny rano avy amin'ny fivarotana ihany no mety alain'ny olona.
MZN. Vola any Mozambika. Fifanakalozana fifanakalozana. banky
Metical. Ny taham-bolan'ny Mozambika
Ny volam-pirenena ao Mozambika dia mikal. Mizara 100 centavos ny metaly. Ankehitriny dia mivezivezy ihany ny volafotsy misy antontan-tariby misy metaly 20, 50, 100, 200, 500 ary 1 000, ary koa vola madinika miaraka amina fika 1 na 5, 10, 20 ary 50 centavos, 1, 2, 5 ary 10 metaly.
Ny fifanakalozana fifanakalozana dia notanterahina amina fifanakalozana tsy miankina maimaim-poana, izay any Maputo no misy azy (eto no misy ny fifanakalozana tombony tena mahasoa). Azonao atao ihany koa ny mifanakalo vola any amin'ny banky (izany no fomba tena azo antoka, izay mieritreritra fa vaomiera avo lenta). Niova betsaka teny an-dalambe aho, nefa azo antoka fa tsy mendrika ny hatokisana.
Ny fampiasana karatra banky dia tsy azo atao afa-tsy ao amin'ny seranam-piaramanidina Maputo, any amin'ny fivarotana metropolitanika ary any amin'ny faritra fivarotana.
Ny banky dia miasa manomboka amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 16:30 manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
Saika ny fivarotana na fivarotana souvenir dia saika handray azy ireo, ankoatry ny vola nasionaly, dolara amerikana ary afrika atsimo afrikana (ny ankamaroany dia be mpampiasa indrindra any atsimon'i Mozambika).
Ny tendrony amin'ny fikarakarana sakafo dia 10 isanjaton'ny filaminana. Ny mpikarakara dia tokony homena $ 0,5 ho an'ny harona 1, ary ny mpitari-dia - hatramin'ny $ 1 ka hatramin'ny $ 2 ho an'ny fitsidihana iray manontolo.
Centavos. Vola ao Mozambika
Ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana dolara any Mozambika dia mandray ireo hotely lehibe amin'ny morontsiraka.
Ny dolara sy ny vola hafa any Mozambika
Fitateram-bahoaka any Mozambika
Ny fitaterana an'habakabaka (sidina anatiny) no fomba haingana sy mora indrindra hitetezana ny firenena. Linhas Aereas de Moçambique dia mampandeha sidina mankamin'ny tanàna lehibe rehetra any Mozambika, amin'ny fampiasana fiaramanidina maoderina sy milamina. Ny lalamby eto amin'ity firenena ity dia tsy dia mandroso. Ny tsipika dia miasa any amin'ny faritra avaratry Mozambika, akaikin'ny sisin-tanin'i Malawi, hatrany Nampula ka hatrany Suak. Any Mozambika ihany koa dia misy fiaran-dalamby avy any Kenya ka hatrany Beira, ary avy any Johannesburg (Afrika atsimo) ka hatrany Maputo amin'ny alàlan'i Swaziland.
Ny mponina ao an-toerana matetika dia mivezivezy any amin'ny fireneny amin'ny bus sy "chapas" (karazana minibus eo an-toerana). Ny andro fiasan'izy ireo dia manomboka amin'ny 4 ora maraina. Matetika i Chapas dia mandeha lavitra lavitra kokoa noho ny bus. Ny salon Chapas dia miavaka amin'ny fampiononana faran'izay kely sy ny tsy fahampian'ny aircon. Ny vidin'ny dia any amin'ireo minibus ireo dia tsy voalaza velively na aiza na aiza, noho izany, mazàna ny mpamily dia mitaky bebe kokoa amin'ireo mpizahatany fotsy manankarena fa tsy any an-toerana. Mba hisorohana ny toe-javatra toy izany dia tokony hizahanao amin'ny trano fandraisam-bahinao mialoha ny vidiny amin'ny fivezivezena amin'ny chapas avy any A ka hatramin'ny B.
Any Mozambika, mazava ho azy, dia misy taxi, fa miasa foana tsy misy metatra izy ireo, ka mila fifampiraharahana mialoha ny saran-dalana. Tena ilaina koa ny mahatadidy fa tsy tokony handoa taxi-be ianao alohan'ny hitondrany anao any amin'ny toerana mety. Ao an-drenivohitr'i Maputo, ny saran-dalan'ny taxi dia voapetraka ary mitentina 200 metatra ho an'ny fitsangatsanganana ao afovoan-tanàna sy avy amin'ny metatra 400 na mihoatra (miankina amin'ny isan'ny kilometatra) mandritra ny dia lavitra. Omaly maraina ny mpamily fiarakaretsaka no minia tsy mahomby ary mitaky haba roa.
Fiantsenana any Mozambika. Inona no hividy?
Ny ankamaroan'ny magazay ao Mozambika dia misokatra isaky ny herinandro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 13 hariva ary manomboka amin'ny 15 hariva ka hatramin'ny 18:30 hariva, ny sabotsy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny iray hariva.
Betsaka ireo bazaria eto amin'ity firenena ity izay amidy ny asa tanana isan-karazany, toy ny harona wicker, kozoro beaded, calabash, ny hazo vita sokitra, fantsona mifoka, lovia seramika, masava. Amin'ity tranga ity dia sahaza hatrany ny fifanajana. Tsarovy fotsiny fa any an-tsena sy amin'ireo magazay kely, ny mpivarotra dia tsy manome ny mpizahatany taloha miova amin'ny banky 500 na 1 000 metaly. Noho izany, mila manandrana fahazoana vola mialoha ianao amin'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny fifanakalozana amin'ny tanana sy / na banky.
Ny tsenan'i Maputo Central dia tsy ny toeram-pivarotana lehibe indrindra ihany, fa koa mari-pamantarana maritrano. Izy io dia mivarotra sakafo vaovao, vokatra fanaka, sary hosodoko hosodoko eo an-toerana, vorona velona, ​​kojakoja ao an-trano, amulet, souvenir, firavaka ary kojakoja fanaovana fombafomba majika. Bazaar iray hafa ao amin'ny afovoan'ny renivohitr'i Mozambika dia antsoina hoe Janet. Manana voankazo, legioma, hena, trondro ary hazan-dranomasina hatrany izy, mifantina tsara indrindra. Manolotra kosmetika shinoa, karana ary breziliana maro koa izy ireo. Tsena Maputo iray hafa - Povo, feno feno tsiro nasionaly eo an-toerana.
Entana mpizahatany tena malaza any Mozambika ny lamba landihazo voaravaka sary savoka. Ilaina ihany koa ireo fahatsiarovana hazo - boaty, vakana, fantsom-biby, sarivongana biby sy olona ary sarontava fombam-pivavahana. Asa-tànana miavaka hafa dia ny sambo vita amin'ny tanimanga, ny sarivongana tanimanga manjelanjelatra, kitapo sy satroka mololo, fanaka, tratra ary harona.
Sakafo nasionaly any Mozambika
Ny nahandro nasionalin'i Mozambika dia niaina fitaomana portogey matanjaka. Azo faritana ho fifangaroana mahaliana sy matsiro amin'ny fomban-drazana any Afrika Atsinanana sy Portiogey ao an-toerana. Tsara homarihina ny sakafo sy ny lovia toy ny saosy piri-piri tena mafana; pamuzinho - horonana hena (henan-kisoa na hen'omby) natolotra niaraka tamin'ny mofo mamy; matapa - lovia foza sy / na makamba misy vary sy ravina mangahazo; "Kamaro National" - makamba namboarina tamin'ny saosy piri-piri voalaza etsy ambony ary koa tongolo, tongolo gasy, vinaingitra ary voasarimakirana; "Kakana" - legioma eo an-toerana misy tsiro mangidy; goulash trondro vita amin'ny trondro voatetika maina, endasina amin'ny menaka ary afangaro amin'ny akoho, tongolo ary ovy.
Anisan'ireo zava-pisotro misy alikaola, ny karazana labiera eo an-toerana toy ny 2M ("doish-em"), Manica sy Laurentina Clara, ary koa labiera avy amin'ny firenena afrikanina mpifanila vodirindrina aminy: Windhoek sy Castle, mahazatra. Ny fanahy, toy ny vodka sy ny gin, dia mora vidy any Mozambika ary amidy na aiza na aiza. Ny zava-pisotro mahery ao an-toerana dia antsoina hoe "bubur" ary vita amin'ny cashews. Manana tsiro marikivy izy io. Ny Porridge dia voalaza fa manana fahaizana mampitombo libido amin'ny lehilahy.